Ikamelo Elihlotshiswe ngokukhethekile e-Hillide elibheke i-Bilgola Beach - I-Airbnb
Ikamelo Elihlotshiswe ngokukhethekile e-Hillide elibheke i-Bilgola Beach
Bilgola Beach, New South Wales, i-Australia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Jenny
Hlala kule ndawo elisogwini efulethini elisha lesitezi esingaphansi. Bheka umkhathizwe ngesikhathi sasekuseni ngaphambi kokuzulazula wehlele e-Bilgola Beach usuku lwelanga nesihlabathi. Phila impilo yeNorthern Beaches ngaphandle kwaseSydney.
Igumbi lokugeza elihlangene nelokulala, Ikhishi, Imipheme eyenza ikamelo libe mnyama, Isiqandisi esincane, I-Sound system, I-Terrace, I-TV, Pakisha bese ugcwala is'ganga/umbhede wosana, Ubona usebe lolwandle, Umatilasi oyi-Pillow-top, umbhede we-queen, Umshini odlala si-DVD, umshini we-Espresso, Umshini wokuphephetha esophahleni, Umshini womoya oqandisayo
4.82 (izibuyekezo ezingu-110)
Kukhona uhambo olumangalisayo ukusuka e-Bilgola ukuya eNewport eduze kwethrekhi yogu. Ibhishi laseBilgola lithandwa ngabantu bendawo njengoba livikeleke kakhulu kunamanye amabhishi, futhi linekhefi eliseceleni kolwandle. I-Avalon Village iseduze nezitolo, izindawo zokudlela, nokunye.
Imizuzu engu-58 oyihamba ngemoto uma ukuminyana kwezimoto kungekho emgwaqeni
Inombolo yepholisi: PID-STRA-14159
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-R2231.
Hlola ezinye izinketho ezise- Bilgola Beach namaphethelo